Arabic အဘိဓါန်အင်္ဂလိပ် Translator, အဘိဓါန် & သင်ယူ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပညာရေး Apps ကပ » Arabic အဘိဓါန်အင်္ဂလိပ် Translator, အဘိဓါန် & သင်ယူ
Arabic အဘိဓါန်အင်္ဂလိပ် Translator, အဘိဓါန် & သင်ယူ APK ကို
စှယျစုံ Britannica နေဖြင့်အခမဲ့ Arabic အဘိဓါန်အင်္ဂလိပ်အဘိဓါန်, translator, နှင့်အင်္ဂလိပ်သင်ယူ app ကို။
အချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆိုဒီအခမဲ့အဘိဓါန်ဘာသာပြန်ချက်နှင့်စွယ်စုံကျမ်း Britannica အနေဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ယူမှု app ကိုနှင့်အတူအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူ! ဒါဟာအပြန်အလှန် app ကိုပြည့်စုံ Arabic အဘိဓါန်အင်္ဂလိပ်နှင့်ဂိမ်းများ & စာလုံးကတ်မှတဆင့်သင်ယူအင်္ဂလိပ် Arabic အဘိဓါန်, စကားလုံးနဲ့ဝါကျ, ဘာသာပြန်ချက်, သဒ္ဒါနှင့်ဘုံအမှားအယွင်းများဉာဏ်စမ်းပဟေဠိများနှင့်ဝေါဟာရပါရှိပါတယ်။ ဒီ app ကိုသင်တို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအလေ့အကျင့်အဘို့, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစကားလုံးစာရင်းနှင့်ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိများကိုဖန်တီးနိုင်ဘယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဧရိယာများပါဝင်သည်။ English အဘိဓါန် entries တွေကို synonym တွေဟာ, example sentences, related စာပိုဒ်တိုများနှင့်ဇာတိစပီကာများကအသံအသံထွက်ပါဝင်သည်။
200,000 အင်္ဂလိပ်ဥပမာစာကြောင်းကျော်နှင့်အတူဘက်စုံ Arabic အဘိဓါန် English အဘိဓါန်√
√လွယ်ကူစွာသုံးစွဲဖို့ - ပဲက၎င်း၏အင်္ဂလိပ်သို့မဟုတ် Arabic ဘာသာပြန်ချက်ရရှိရန် Arabic သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်စကားလုံးတစ်လုံးသို့မဟုတ်ထားသောစာပိုဒ်တိုများရိုက်ထည့်ပါ - ဘာသာစကားရွေးချယ်ဖို့မလိုအပ်
√ဘယ်နေရာမှာမဆို Translate: ကိုအခြားလျှောက်လွှာအပေါ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာစကားလုံးများကို; Britannica အင်္ဂလိပ်သူတို့နှင့်အတူဝေမျှနှင့် instant ဘာသာပြန်ချက်ရ
√ Voice ကိုရှာဖွေမှု - အသံဖြင့်အဘိဓါန်ရှာဖွေရေးနေဖြင့်မည်သည့်ဝေါဟာရကိုဘာသာပြန်ဆို
√အော်တိုပြီးဆုံး - သင်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးစာရိုက် start သောအခါ, app ကိုအလိုအလျှောက်ပါကဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မယ်
√ကို Reverse ဘာသာပြန်ချက် - က၎င်း၏ Arabic အဘိဓါန်ဘာသာပြန်ချက်ရရှိရန်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုအတွင်းမည်သည့်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကိုအသာပုတ်
√အားလုံးအင်္ဂလိပ်နှင့် Arabic အဘိဓါန်ပုံစံများနှင့်အများကိန်းများနှင့်အပြည့်အဝရေီ Tashkeel (သရသံဆိုင်းဘုတ်များ) ပါဝင်သည်
အဆိုပါနေ့√နှုတ်ကပတ်တော်ကို - အသစ်သောစကားများနှင့်စာပိုဒ်တိုများလေ့လာသင်ယူနေ့တိုင်း
√ဝေါဟာရဂိမ်းများနှင့်စာလုံးကတ် - သင့်အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဘဏ်လုပ်ငန်း, အစားအစာ, ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်ပိုပြီးအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများတွင်ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိကစားခြင်းအားဖြင့်သင့်တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံ။ အပိုင်း "စကားသင်ယူပါ" ယခုရရှိနိုင်အော့ဖ်လိုင်းဖြစ်ပါသည်
√ထိုကဲ့သို့သော Grammar, ဘုံအမှားအယွင်းများနှင့် Jargon ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများအတွက်အမြန်ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိနှင့်သင်၏အင်္ဂလိပ်ကျွမ်းကျင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
√သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစကားလုံးစာရင်းမကြာသေးမီအဘိဓါန်ကြည့်-up, သမိုင်းနှင့်ပဟေဠိအမှားများကို Save
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စကားများနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူသင်၏ဂိမ်း '' ရလဒ်များ√ဝေမျှမယ်ဘာသာပြန်ချက်
√ constant မွမ်းမံ - အဆိုပါအဘိဓါန်အဆက်မပြတ်အသစ်သောအသုံးအနှုန်းများ, buzzwords, ဘန်းစကားအသုံးအနှုန်းတွေနှင့်စကားထူးနှင့်အတူ updated ဖြစ်ပါတယ်။ စကားများစာရင်းနှင့်ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိလည်းမှန်မှန် updated နေကြတယ်
√သင်သည်ထိုကဲ့သို့သော TOEFL, SAT နှင့် GMAT အဖြစ်အရေးကြီးသောစမ်းသပ်မှုအတှကျပွငျဆငျကူညီပေး
√သင့်ရဲ့ user interface ကို (Arabic အဘိဓါန် / အင်ျဂလိ) ကိုရွေးချယ်ပါ
NEW √! ရွေးချယ်စရာ Upgrade - ကြော်ငြာတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစကားလုံးစာရင်း quotaThis သစ်ကိုအခမဲ့ဗားရှင်းတိုးမြှင့်အန်းဒရွိုက် 4.0 အသုံးပြုသူများနှင့်တက်သည်လက်ရှိတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အစောပိုင်းကအန်းဒရွိုက်ဗားရှင်းယခင် Britannica အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းကိုဆက်သုံးလို့ရပါတယ်။
ဒီဗားရှင်းသစ်ကိုကြိုးစားပြီးနှငျ့ "ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ" option ကိုမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ပေးပို့ပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ input ကိုတန်ဖိုးထား!
www.britannicaenglish.com/arabic: ကိုလည်းသင်မှာကြှနျုပျတို့၏ website မှတဆင့်အင်္ဂလိပ်လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်
Arabic အဘိဓါန်အင်္ဂလိပ် Translator, အဘိဓါန် & သင်ယူ
8.77 ကို MB
Britannica အင်္ဂလိပ်သင်ယူ & ဘာသာပြန်စာပေ